Iwo matsva maPad mhando haazoone mwenje kusvika yechipiri hafu ya2017 | IPhone nhau
Kunyangwe paine runyerekupe rwekuti vakazivisa chiitiko cheApple munaKurume kuzarura matatu maPads, ruzivo rwekupedzisira kuburitswa kubva kuApple keteni inoratidza kuti kukwidziridzwa kwepiritsi hakuzosvika kune vatengi kusvika svondo rinotevera.hafu yechipiri yegore.
Ichitaura nezve data rakaunganidzwa kubva kuCupertino-yakavakirwa kambani kambani, DigiTimes yakashuma China kuti izvo zvemukati zvezvinhu zvitsva zvePads zvichiri muchikamu chekuronga. Nekuda kweizvozvo, kutumirwa kwemahwendefa matsva eApple hakugone kuitika chero zvakadaro kusvika hafu yechipiri yegore rino 2017.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti nepo DigiTimes ichiwanzo ruzivo nezve zviitiko zvezviitiko zviri kuitika mukutengeswa, kushambadzira kune rekodhi rekodhi kana zvasvika pakutsanangura uye nezvenguva nguva yezvigadzirwa zveApple zvemangwana. Semuenzaniso, mugore ra2014, zvakawanda zvakapihwa nezve izvo zvaitaurwa nerunyerekupe zvakanyanya panguva iyoyo: 12-inch MacBook, asi yakapa iyo yemwedzi gumi nemashanu kuvhura hwindo. Nekudaro, chishandiso chakazoburitswa muna Kubvumbi 15.
Nezve runyerekupe rweChina rweChishanu rapfuura, ruzivo rwechizvino-zvino rwakafumurwa rwunoratidza kuti iyo 10.5-inch iPad uye 12.9-inch iPad Pro ichave neyakaomeswa yakaoma yakaoma processor A10X kubva kuApple. Hazvizivikanwe kuti ndeipi processor ichaiswa mukati meiyo 9,7-inch iPad, sezvo vachinzi vanonangana nebazi redzidzo, nenzira imwecheteyo yakaita eMac pakutanga uye MacBook Air iri kuyedza kuita izvozvi.
Iyo skrini yeiyo 9,7 iPad ichagadzirwa neKorea-yakavakirwa Seoul Semiconductior, maererano neruzivo rwechazvino, nekudaro uchibva kure nemutengesi wazvino, Nichia. Zvinotaridzwa zvakare kuti imwe nhevedzano yezvinhu zvinogadzira mudziyo ichagadzirwa ne "vechipiri vatengesi", pasina kudoma kuti ndeapi. Uye hapana chero chinhu chakaburitswa pachikonzero kana zvikonzero zvekuchinja uku, zvinoita kunge kwakanyanya kupindura kuzvikonzero zvezvinhu pane kukwikwidza.
Runyerekupe rwekutanga nezve 10.5-inch iPad yakatanga kutenderera muna Nyamavhuvhu, pamwe nedzimwe nharo dzino tarisa kuti kuchave ne10,9-inch modhi yakafanana neiyo iPad Air. Kubva pamaonero ekushanda, iyo 10,5-inch saizi inonzwisisika kupfuura iyo 10.9-inch. Kuchengeta chiyero chakaenzana uye pixel density seyakatangira, iyo iPad's 10,5-inch upamhi yakafanana neiyo iPad mini. Shanduko kune 10,5-inch screen inogona kubvumidza Apple kusundira mureza wayo kune screen density ye326 pixels pa inch, vhezheni yakakwira kupfuura yazvino 264 pixels pa inch.
Chekupedzisira, mishumo ichangoburwa yakabudawo pachena kubva kune yakapihwa cheni inoratidza kuti iyo mini mini, iyo isina kuvandudzwa kubvira 2015, ichagamuchira yekuvandudza. Munin'ina mudiki wemhuri yePadad anoita kunge ndiye akasarudzika zvakanyanya izvozvi, asi zvakadaro, pane chaicho kudiwa kwerudzi urwu rwechigadzirwa pakati pevashandisi. Hupamhi hwehurefu hunogamuchirwa neiyo iPad mhando, kune ayo mamodheru matsva ane hukuru hutsva anosvika gore rega, inogona kuve chikonzero chekushayikwa kwekuvandudzwa kweiyo mini, iyo yakadzoserwa mukuzvidzwa kwedhijitari neApple. Nekusvika kwekuvandudzwa kune iyi modhi, vashandisi vazhinji, kunyanya mundima yedzidzo, vanozoona tarisiro yakagadziriswa uye mhedzisiro yavanogona kuwana pahwendefa diki reapuro.
Runyerekupe harumire uye rwunowedzera sezvo mazuva anoswedera apo Apple, senguva dzose, kazhinji inobata zvigadzirwa zvitsva zvekuratidzira zvigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iwo matsva maPad mamodheru haazoone mwenje kusvika yechipiri hafu ya2017